Kuzonquma iNEC ngoMkhize KwaZulu-Natal | IOL Isolezwe
Kuzonquma iNEC ngoMkhize KwaZulu-Natal
Isolezwe / 20 December 2012, 2:21pm /
437 Newly elected treasurer general Zweli Mkhize raises his fist next to the new deputy president Cyril Ramaphosa and re-elected president Jacob Zuma at UFS during the ANC 53rd congress in Mangaung, Bloemfontein. 181212. Picture: Bongiwe Mchunu
KUBHEKWE isigungu esiphezulu esisha sikaKhongolose ekutheni sithathe isinqumo ngekusasa likaNdunankulu waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize mayelana nokuthi ngabe uzoqhubeka yini nesikhundla sakhe njengoba esenguMgcinimafa walo mbutho kuzwelonke.
UMkhize uqokwe njengoMgcinimafa omusha kazwelonke ngoLwesibili engqungqutheleni ka-53 ephothulwa namhlanje eMangaung, yokukhetha ubuholi obusha be-ANC .
Kwenzeka lokhu nje uMkhize usanda kuqokwa engqungqutheleni yesifundazwe ebiseNewcastle njengoSihlalo we-ANC e-KZN ihlandla lesibili .
UMkhize wale waphetha ukukhuluma nabezindaba ngalolu daba kodwa wathi uzizwa ejabule futhi ezithoba ngokuqokwa kwakhe kulesi sikhundla yizithunywa ze-ANC.
UNobhala we-ANC esifundazweni uMnuz Sihle Zikalala uthe isigungu esiphezulu sombutho esinamandla okunquma ngekusasa likaMkhize ngesikhundla sakhe anaso e-KZN nanokuthi ngabe angakwazi yini ukuqhubeka naso ngokugcwele .
“Akusilona udaba oluphuthumayo lolu kithina njengesifundazwe,” kusho uZikalala.
UZikalala uphinde wacashunwa esiteshini esizimele sezindaba i-e-News Channel Africa ethi abantu kuzomele baqonde ukuthi uMengameli Jacob Zuma waqo-kwa njengoSihlalo we-ANC kuzwelonke ekubeni ayengu-Sihlalo walo mbutho eKZN.
Uthe akazange aziyeke lezi zikhundla kodwa waqhubeka nokuziphatha zombili.
Uphinde wathi uma kungenzeka ubuholi bunqume angeke bumphazamise uMkhize esikhundleni sobuNdunankulu kodwa sekungakhulunywa ngalesi sikaSihlalo.
Kunamahlebezi okuthi amalungu amaningi kaKhongo-lose eKZN afuna uMkhize aqhubeke nokuba uNdunankulu kuze kufike ukuphela kwesikhathi sakhe ngo-2014.
Lokhu kusho ukuthi maningi amathuba okuthi asishiye isikhundla sokuba uSihlalo weqembu esifundazweni uma kwenzeka izithunywa zisamukela isiphakamiso sokuthi kumele amalungu asuke eqokelwe izikhundla zikazwelonke azishiye ezisezingeni lesifundazwe.
Okunye okuvelayo uma kukhona okwenzekayo kungagcina kuqokwa uMnuz Willies Mchunu ekutheni abambe isikhundla sokuba uNdunankulu nokho uZikalala ukuchithile lokhu wathi alikho ilungu leqembu esifundazweni elicabangana nezikhundla.
“Njengesifundazwe sizosebenzisana nazo zonke izinhlaka zeqembu nezinye izifundazwe njengeLimpopo nalabo abebephikisana noZuma ekutheni athathe ihlandla lesibili. Ngaphandle kwalokho kulolu daba lukaTokyo Sexwale ngisho noma angakhethwa ku-NEC aphinde ajutshwe ukuzosebenza nathi esifundazweni angeke sibe nayo inkinga,” kusho uZikalala.